အလုပ်ချိန်မှာပါ Game ဆော့တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိန်ကန်နိုင်ငံက Gamers များ
5 Apr 2018 . 6:12 PM
အလုပ်ချိန်မှာပါ Game ဆော့တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိန်ကန်နိုင်ငံက Gamer များ
Limelight Networks ကနေပြီးတော့ US, UK, France, Germany. South Korea နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ Gamer ၃ထောင်ကျော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းတို့ရဲ့စစ်တမ်းအရ အမေရိန်ကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Gamer 40% လောက်ဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာတောင် ဂိမ်းဆော့တယ်လို့ဖြေဆိုထားကြပါတယ်။
အမေရိန်ကန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ 35% သော အသက် 18-25 နှစ်အရွယ် Gamer တွေဟာ တစ်လမှာ အနည်းဆုံး ၁ကြိမ် ဆော့ကြပြီး 8.6% သော Gamer တွေကတော့ အလုပ်မှာနေ့တိုင်းဂိမ်းဆော့တယ်လို့စစ်တမ်းအရသိရှိရပါတယ်။ အများဆုံးဆော့ဖြစ်တဲ့ဂိမ်းတွေကတော့ Solitaire နဲ့ Candy Crush တို့ဖြစ်ပြီး ၄င်းဂိမ်းတွေကိုဆော့ရတာဟာ PUBG ဆော့တာလောက်အချိန်လည်းမကုန်သလို အလုပ်ကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ Gamer 60% ကျော်ကတော့ Game ဆော့ဖို့အတွက် အိပ်ချိန်တွေ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောကြသလို 40% နီးပါးကတော့ Game ဆော့တဲ့အတွက် နေ့လည်စာ မစားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံရပါတယ်တဲ့။ ကဲ သင်ရော အလုပ်ချိန်မှာ ဂိမ်းဆော့ဖြစ်လား၊ နေ့လည်စာရော ငတ်ဖူးပါသလား ?
အလုပျခြိနျမှာပါ Game ဆော့တယျဆိုတဲ့ အမရေိနျကနျနိုငျငံက Gamer မြား
Limelight Networks ကနပွေီးတော့ US, UK, France, Germany. South Korea နဲ့ ဂပြနျနိုငျငံတို့မှာရှိတဲ့ Gamer ၃ထောငျကြျောကို ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျလောကျက စဈတမျးကောကျယူခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ရဲ့စဈတမျးအရ အမရေိနျကနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ Gamer 40% လောကျဟာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အလုပျခြိနျအတှငျးမှာတောငျ ဂိမျးဆော့တယျလို့ဖွဆေိုထားကွပါတယျ။
အမရေိနျကနျနိုငျငံတှငျးမှာရှိတဲ့ 35% သော အသကျ 18-25 နှဈအရှယျ Gamer တှဟော တဈလမှာ အနညျးဆုံး ၁ကွိမျ ဆော့ကွပွီး 8.6% သော Gamer တှကေတော့ အလုပျမှာနတေို့ငျးဂိမျးဆော့တယျလို့စဈတမျးအရသိရှိရပါတယျ။ အမြားဆုံးဆော့ဖွဈတဲ့ဂိမျးတှကေတော့ Solitaire နဲ့ Candy Crush တို့ဖွဈပွီး ၎င်းငျးဂိမျးတှကေိုဆော့ရတာဟာ PUBG ဆော့တာလောကျအခြိနျလညျးမကုနျသလို အလုပျကိုလညျးထိခိုကျမှုမရှိဘူးလို့ဆိုကွပါတယျ။
ကမ်ဘာတဝှမျးမှာရှိတဲ့ Gamer 60% ကြျောကတော့ Game ဆော့ဖို့အတှကျ အိပျခြိနျတှေ ဆုံးရှုံးတယျလို့ပွောကွသလို 40% နီးပါးကတော့ Game ဆော့တဲ့အတှကျ နလေ့ညျစာ မစားလိုကျရတဲ့ဖွဈရပျတှကွေုံရပါတယျတဲ့။ ကဲ သငျရော အလုပျခြိနျမှာ ဂိမျးဆော့ဖွဈလား၊ နလေ့ညျစာရော ငတျဖူးပါသလား ?